တောင်အာရှ - ဝီကီပီးဒီးယား
တောင်အာရှ (အင်္ဂလိပ်: South Asia or Sourthern Asia) သည် ပထဝီ အနေအထားအရ လည်းကောင်း၊ လူမျိုးစုများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရ လည်းကောင်း အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသော အာရှတိုက်၏ တောင်ပိုင်းဒေသ ဖြစ်သည်။ ဤဒေသတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဘူတန်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မော်လဒိုက်နိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။
၅,၁၃၄,၆၄၁ km2 (၁,၉၈၂,၄၉၆ sq mi)
၃၆၂.၃/km2 (၉၃၈/sq mi)
တောင်အာရှသားများ (အင်္ဂလိပ်: South Asian)
Dari (ပါရှားဘာသာစကား သို့မဟုတ် Persian)
တောင်အာရှဒေသ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်း (SAARC) သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး၊ တောင်အာရှရှိ ၈-နိုင်ငံစလုံး ပါဝင်သည်။
"နိုင်ငံများနှင့် နယ်မြေများ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် အခြားဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့်ကြိုတင်ယူဆချက်များမှ မပါဝင်သည့် စာရင်းအင်း အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာ ဖန်တီးထားသည့်" UNSD၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်အပါအဝင် တောင်အာရှ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်အမျိုးမျိုး
တောင်အာရှ၏ ခေတ်သစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံ၊ ဘူတန်နိုင်ငံနှင့် မော်လဒိုက်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် အချို့က အာဖဂန်နစ္စတန်ကို အာရှအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံအဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ အနောက်အာရှနိုင်ငံအဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံအဖြစ် သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ပြန်သည်။ ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် - အာဖဂန်စစ်ပွဲအပြီးတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသည် ၁၉၁၉ ခုနှစ်အထိ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင် ၁၈၈၆ မှ ၁၉၃၇ အတွင်း ဗြိတိသျှအင်ပိုင်ယာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (British Raj) အဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော၊ ယခုအခါ အရှေ့တောင်အာရှ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် အများအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ တောင်အာရှတွင် ထည့်သွင်းထားခဲ့ဖူးသည်။
↑ Among the top 100 urban areas of the world by population.
↑ Southern Asia Population, October 2020။ Worldometer။
↑ World Economic Outlook Database (October 2020)။
↑ Report for Selected Countries and Subjects။ IMF။ Outlook Database, October 2018
↑ Afghanistan။ Institute of Development Studies။;
Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings: Southern Asia။;
The World Bank။;
Institute of Development Studies: Afghanistan။;
Harvard South Asia Institute: "Afghanistan"။;
"Afghanistan"၊ BBC News၊ 2018-01-31။ ;
The Brookings Institution (2001-11-30)။;
South Asia။ The World Factbook။ Central Intelligence Agency။2April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SAARC Summit။ SAARC။ SAARC Summit။
↑ Standard Country or Area Codes for Statistical Use။ Millenniumindicators.un.org။ Quote: "The assignment of countries or areas to specific groupings is for statistical convenience and does not imply any assumption regarding political or other affiliation of countries or territories by the United Nations."
↑ ၇.၀ ၇.၁ "Afghanistan Country Profile"၊ BBC News။
↑ The Brookings Institution (2001-11-30)။
↑ ၉.၀ ၉.၁ CIA "The World Factbook"။2April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Ghosh၊ Partha Sarathy (1989)။ Cooperation and Conflict in South Asia။ Technical Publications။ pp. 4–5။ ISBN 978-81-85054-68-1။ 16 May 2016 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 12 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Jona Razzaque (2004)။ Public Interest Environmental Litigation in India, Pakistan, and Bangladesh။ Kluwer Law International။ pp.3with footnotes 1 and 2။ ISBN 978-90-411-2214-8။7October 2017 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 11 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Keith Robbins (2012)။ Transforming the World: Global Political History since World War II။ Palgrave Macmillan။ p. 386။ ISBN 978-1-137-29656-6။ , Quote: "Some thought that Afghanistan was part of the Middle East and not South Asian at all".
↑ * Saez၊ Lawrence (2012)၊ The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): An emerging collaboration architecture၊ Routledge၊ p. 58၊ ISBN 978-1-136-67108-1၊ Afghanistan is considered to be part of Central Asia. It regards itself asalink between Central Asia and South Asia.
↑ Phillip Margulies (2008)။ Nuclear Nonproliferation။ Infobase Publishing။ p. 63။ ISBN 978-1-4381-0902-2။ , Quote: "Afghanistan, which lies to the northwest, is not technicallyapart of South Asia but is an important neighbor with close links and historical ties to Pakistan."
↑ Harvard South Asia Institute: "Afghanistan"။
↑ Baten, Jörg (2016)။ A History of the Global Economy. From 1500 to the Present.။ Cambridge University Press။ p. 287။ ISBN 978-1-107-50718-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်အာရှ&oldid=673534" မှ ရယူရန်
၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။